I-Instagram Checkout ngoku isetyenziswa ngawo onke amashishini afanelekileyo eMelika kwaye izakuhamba kwihlabathi liphela kungekudala.
Inqaku lokuphuma lisivumela ukuba sithenge iimveliso ngokuthe ngqo kwi-app yethu ye-Insta. Ukususela ngoku ukuya phambili, singabeka iiodolo zethu ngqo kwi-Insta xa siphonononga izithuba ezinokuthengwa kunye neethegi zemveliso esizithandayo.
Ngokwe-Instagram, 130 millions d’utilisateurs cliquent chaque mois sur des posts shoppable, kwaye ayothusi into yokuba i-Instagram ngoku ibeka lo msebenzi ” Phuma ” iyafumaneka kuwo onke amashishini eMelika.
Ukwanda kokuthandwa “Izithuba ezithengiswayo” iguqule ngokukhawuleza i-Insta kwiqonga le-e-commerce. Inqaku lokuphuma ngoku liza kuluncedisa olu tshintsho kwaye luphucule amava omsebenzisi ukuze abe ngcono.
Ngoku sinokucofa kwithegi yemveliso esiyithandayo kwaye sihlawule ngqo kwi-Instagram kuloo mveliso. Inkqubo yethu yokuthenga ayikaze ibe lula nakweyiphi na indawo yokuncokola.
Bayitshintshe ngokupheleleyo indlela esithenga ngayo kwaye bayiguqula indlela iinkampani ezisebenzisa ngayo ivenkile yazo ye-Insta..
Kubanini bamashishini, Ukukwazi ukuguqula ngokukhawuleza abaphulaphuli babo ukusuka ngokukhangela nje ukuya kuthenga iimveliso ngaphandle kokushiya iziphumo ze-Instagram app kwizinga lokuthengisa elonyukayo.
Amashishini, i abachaphazeli kunye nabasebenzisi baya kufumana amaxesha amnandi kunye nokusebenza kwentlawulo.
Ngaba kufuneka usebenzise i-Instagram Checkout?
Uninzi lwethu belusebenzisa iqonga le-Insta lokuthengisa kunye nentengiso iminyaka eliqela ngoku., kwaye siyazi ngokubaluleka obe nakho kwizicwangciso zethu zokuthengisa.
Kodwa iinguqu zakutshanje zonyaka ophelileyo zilwakha ngokutsha ngokupheleleyo eli qonga.. Akufuneki ukuba ibe yindawo yokuthengisa nje.
I-Instagram Checkout feature inikezela abathengi bethu ngeqonga elilula, apho banokuthenga khona iimveliso zethu.
Kulo nyaka, I-Instagram izamile ukulungiselela amashishini kunye neempawu njengoko zinokubakho kubhubhane.
Benze ngokubanzi ukusebenza kwevenkile kwihlabathi liphela kwaye bakhupha ikhowudi ye-QR ukusinceda sikhulise ishishini lethu kwi-Insta.
I-Instagram ixeliwe que 80 % des comptes suivent un compte d’entreprise, echaza ngokucacileyo ukuba kutheni basebenze nzima beqinisekisa ukuba sinokufumana okuninzi kwiqonga lethu.
Nantsi indlela abasebenzisi abanokuthenga ngayo iimveliso zethu ngamanyathelo ambalwa alula:
Cofa kwi icon yokuthenga
Cofa kwimveliso ebonisiweyo
• Cofa kwirejista yemali
• Faka iinkcukacha zekhadi kunye nolwazi lokuhlawula
Cofa kwiodolo yendawo
Indlela yokufaka isicelo kwi-Instagram Checkout?
Ungasebenzisa ukuphuma kwe-Instagram okwangoku eUnited States, kodwa kufuneka uqale uqwalasele ivenkile yakho.
Iakhawunti yakho ke idityaniswe kwiphepha lakho likaFacebook okanye kwiShopify, apho i-Insta inokufumana khona ikhathalogu kunye nolwazi ngemveliso.
I-Insta isebenzisa ulwazi lwakho ukwenza iileyibhile zemveliso yakho ukuze ukwazi ukumakisha iimveliso zakho kwiifoto zakho, iividiyo kunye ne-IGTV ngoku.
Emva kokumisela ngempumelelo ivenkile yakho, ungasebenzisa le fomu apha ukucela ukuphuma.
Ukuba awukho eMelika, lunga kwaye wenze ivenkile yakho. Qalisa ukusebenzisa umsebenzi wentlawulo ngokukhawuleza ukuba usasazwe kwihlabathi liphela.
Ungalufumana njani uninzi kwirejista yemali yakho
Sineengcebiso ezimbalwa kuwe zokufumana uninzi lwento yakho yokuphuma kwi-Instagram., kwaye ngale ndlela, Unokuqinisekisa ukuba uyonyusa ukuthengisa kwakho.
1. Cinga ukumakisha iimveliso zakho kuzo zonke iifomati zomxholo
Sukunciphisa iilebheli zakho ukuba ufuna ukwandisa ukuthengisa kwakho. Njalo khumbula ukumakisha iimveliso zakho kwifomathi nganye yomxholo. Fumana uninzi lweefoto kunye nevidiyo.
Ngokuphuhlisa iithegi kwiifomathi zomxholo ezahlukeneyo, Uqinisekisa ukuba ufikelela kubantu abaninzi kangangoko banokubona umxholo wakho.
Okukhona iimveliso zakho zibonakala, ngokulula kubaphulaphuli bakho ukuba baqaphele kwaye bathenge kuwe ngenkqubo yokuphuma.
2. Intsebenziswano kunye nefuthe
Iimpembelelo zikhulu, kwaye bayathandwa kakhulu ngabalandeli babo. Kuya kufuneka sibanike ikhredithi kuba balungile kwinto abayenzayo.
Uninzi lwazo luye lwaphumelela ekuqhubekeni luphuhlisa amaqonga abo ngokuzibandakanya kunye nokuvelisa umxholo wokuqala kubalandeli babo abathembekileyo.. Le yindlela abaziphilisa ngayo, ke kufuneka bayazi into okanye ezimbini.
Ngokusebenzisana nabachaphazeli kunye nabanini beakhawunti abanokuthi banokuthi bathengise iimveliso ngokuthe ngqo kumxholo wabo, ungazithengisa iimveliso zakho ngomsindo ngakumbi kwiqonga labo, kodwa ngendlela eyiyo.
Ayizukuphawuleka kuphela ukuba iimveliso zakho ziqwalaselwa ngokukhawuleza kakhulu ngabalandeli bazo, kodwa ikwayindlela efanelekileyo yokuzazisa, ngaphandle kokuzama ukuthengisa iimveliso zakho ngokuthe ngqo.
3. Sebenzisa ii-carousels
Sebenzisa ii-carousels kwiimveliso zakho kunokufikelela kubaphulaphuli bakho ngokukhawuleza, kodwa ngokufanelekileyo. Eyona nto ibonakalayo ekholisa imifanekiso yeemveliso zakho, ngokulula kuya kuba lula ukubamba umdla wabaphulaphuli bakho.
Yila kwaye wenze imifanekiso kunye nezinye zeemveliso zakho. Ngele ndlela, awukwazi ukuphawula kuphela iimveliso ezimbalwa kumxholo omnye, kodwa ukwalatha ezi mveliso kunye kunye kwaye ngokukhawuleza.
Ukugcina kunye nemisebenzi yokuhlawula ngokukhawuleza iguqula i-Insta kwiqonga elikhulu kunangaphambili. Qiniseka ukuba uhlala ubukele kwaye uziqhelanise nazo zonke izinto ezikhoyo nezintsha ezikhutshiweyo..
Iqela le-Instagram lisebenze nzima kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo ukuhlangabezana neemfuno zakho kunye nolindelo, ke qiniseka ukuba uzisebenzisa ngokupheleleyo zonke izibonelelo ekufuneka uzenzile.
Article précédentUkuthenga kwe-IGTV ngoku kuyafumaneka kwi-Instagram
Article suivantNgokuzenzekelayo njenge-Instagram: IBot yokuKhetha ngokuZenzekelayo